ढोका खोल्ने कि ? - Himalkhabar.com
अर्थ/बजारमंगलबार, चैत्र १३, २०६९
ढोका खोल्ने कि ?
‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ ले नेपालीलाई विदेशमा विदेशी फर्मसँग साझेदारी गर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, विदेशी ब्याङ्कको एकाउन्ट खोल्न, विदेशी सेक्युरिटी खरीद गर्न र नगद/जिन्सी लगानी गर्न निषेध गरेकाले व्यवसायीले छली बाटो प्रयोग गरेका हुन्। ऐनले विदेशमा लगानी गरे बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कसैलाई शर्तसहित विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति दिनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा ‘नेपाली पूँजी प्रविधिलाई विदेश जान दिन कानून तर्जुमा गर्ने’ भनिए पनि अहिलेसम्म कानून बनेको छैन।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन ढिला भइसकेको बताउँछन्। “विदेश जान दिंदा नेपाली कम्पनीले विश्वव्यापी फाइदाको हिस्सेदारी दाबी गर्न सक्छन्” उनको विश्वास छ। २०४६ को परिवर्तनपश्चात् विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खोलेको नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अधिकांश क्षेत्रमा त्यसलाई स्वीकारिसकेको छ। यस्तो बेला विदेशमा लगानी गर्न रोक्दा ‘वन वे ट्राफिक’ बढाउने बताउँछन् पाण्डे। योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ पनि नेपाली उद्योगीलाई बहुराष्ट्रिय बन्न बाटो खोलिदिनु नै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने छ।